ကိုယ်ပူတိုင်း COVID_19 လား…………………. - Hello Sayarwon
ကိုယ်တွေပူတယ်။ ချောင်းတွေ ဆိုးတယ်၊ နှာချေတယ်ဆိုရင် လူတိုင်းက စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တဲ့ ပုံစံနဲ့လှမ်းကြည့်တတ် ကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန် မြင့်တက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ်ခံအားက ပြင်ပက ဝင်ရောက်လာတဲ့ ရောဂါပိုးတွကို အပြင်းအထန် ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ သဘောပါ။ ဒီတော့ ကိုယ်ပူလာတဲ့အခါ ငါများ COVID_19 ဖြစ်နေပြီလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်လေး ကင်း​ကြစေဖို့ ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်လား…………
ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်က လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှာ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပုံမှန်ချိန်ကတော့ ၉၈.၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တာမှာ စားသောက်တာ၊ အိပ်စက်တာနဲ့ လုပ်ဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်လိုက်ပြီး ကိုယ် အပူချိန်က ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်က ညနေ ၆ နာရီ ဝန်းကျင်မှာ အမြင့်ဆုံး အခြေအနေကို ရောက်နေတတ်ပြီး မနက်ခင်း ၃ နာရီအချိန်မှာ အနိမ့်ဆုံး အခြေအနေကိုရောက်နေတတ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်က ၉၉ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ ၁၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် နဲ့ ၁၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် အထက်ဆိုရင် ကိုယ်ပူနေပြီ၊လို့ ပြောပါရစေ။
ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ကို မြင့်တက်စေတဲ့အချက်က တစ်ခု မကရှိပါတယ်။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတာတွေကြောင့် ကိုယ်ပူနိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးတွေမှာဆိုရင် အခုပြောခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေအပြင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန် နဲ့ သွားပေါက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကိုယ်အပူချိန်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို အခြေအနေမှာ အဖျားတာရှည်နိုင်လဲ………….
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အဖျားက တာရှည်လေ့မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ အဖျားက ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတာ ဒါမှမဟုတ် ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်ခံရတာကြောင့် ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဖျား တာရှည်နိုင်ပါတယ်။
COVID_ 19 ​ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပူတာနဲ့ ရိုးရိုး ကိုယ်ပူတာ ဘာကွာခြားလဲ…………….
ရုတ်တရက် ခွဲရခက်နိုင်တဲ့ အဖြစ်များတဲ့ ကိုယ်ပူရခြင်း အကြောင်းအရင်းတွေကို သတိထားလို့ရစေဖို့ ပြောပြပေးမယ်နော်။
အအေးမိတဲ့အခါ အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာအနေနဲ့
ခန္ဓာကိုယ် နာကျင်ကိုက်ခဲတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းသွားမယ် စတာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ အရေပြားတွေ ယားယံမယ်
အသက်ရှူတဲ့အခါ တရွှီရွှီ မြည်မယ်
ခြေကုန်လက်ပန်းကျမယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဗိုင်းရပ်စ်ရောက်ရှိပြီး ၂ ရက်နေ ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ပြနိုင်ပါတယ်။
ကြွက်သားတွေ၊ အဆစ်တွေ နာကျင်ကိုက်ခဲတာ
အခုလို အခြေအနေဆို ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသပါ
အသက်ရှူတာ ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်းဖြစ်နေမယ်
မျက်နှာနဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ ပြာနှမ်းနေမယ် ဆိုရင် နီးစပ်ရာက COVID_19 ကို ကုသမှုပေးနေတဲ့ ကုသရေးဌာနတွေကို အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြား သွားရောက်ပါ။
နှာချေ၊ချောင်းဆိုးတိုင်း နှာခေါင်းကို တစ်ရှူးစနဲ့ အုပ်ပါ။ ပြီးရင် အမှိုက်ပုံးထဲကို သေချာ စွန့်ပစ်ပါ။ တစ်ရှူး အလွယ်တကူမရရင် တံတောင်ဆစ်မှာ နှာချေချောင်းဆိုးလုပ်ပါ။
Coronavirus (COVID-19) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html Accessed Date 12 April 2020
Not Sure You Have COVID-19? Here Are the Symptoms for Coronavirus, Flu, and Allergies https://www.healthline.com/health-news/flu-allergies-coronavirus-different-symptoms Accessed Date 12 April 2020
Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Accessed Date 12 April 2020
Fever in Adults and Children https://www.medicinenet.com/aches_pain_fever/article.htm Accessed Date 12 April 2020